I-china BPA Free Collapsible Water Container (ngeSpigot) ifektri nabaphakeli | Kaiguan
Ngaphandle, Ukusetshenziswa Okuphuthumayo Nokusetshenziswa Kwansuku Zonke:
Isiqukathi samanzi esigoqekayo, esifanele imisebenzi yangaphandle, njengokupakisha ubhakha, ukukhempa, ukuhamba izintaba, ukukhuphuka, ukuzingela, kungakusiza ukugcina wonke amanzi umndeni wakho awadingayo ngokushesha nangokuphepha uma kwenzeka kuba nesimo esiphuthumayo noma inhlekelele yemvelo efana nesiphepho, isiphepho, ukuzamazama komhlaba , umlilo, isikhukhula noma isomiso. Futhi ilungele ukusetshenziswa kwansuku zonke, njengezimoto eziphuthumayo zamanzi neziteshi zokuwasha izandla emicimbini nasemikhosini. Ukuhambisa amanzi amaningi kalula.
I-Leakproof Spigot: Idizayini yepayipi eyingqayizivele, i-spigot eyenzelwe kalula / evaliwe, Vimbela ukuvuza kokuthwala amanzi, akukho ngxabano yamanzi asakazeka yonke indawo, ungalawula ngokushesha ukugeleza kwamanzi, okulula ukuyisebenzisa.
l Iyagoqeka, Iyaphatheka, Iyakhanya, I-Compact & Designable foldable Design
l Ihlala ithambile futhi iguquguquka noma ngabe kubanda kodwa kugcina isimo.
l Kulula ukugcwalisa, ukoma, ukukhipha futhi usebenzise kabusha.
l Izibambo ezibunjiwe ezithambile zenza ukubamba nokuthutha kube lula.
l Okugoqekayo kungagcinwa futhi kube lula ukubamba ubhaka wakho noma emotweni yakho.
Izikhwama zokugcina amanzi zibalulekile empilweni yansuku zonke nasezimweni eziphuthumayo. Uma ingqalasizinda yamanzi edolobheni lakho iyeka ukusebenza ngokungazelelwe, uzophuza noma uyihlanze kanjani?
Uma kunesiphepho, isiphepho, izikhukhula, umlilo, isomiso, ukuzamazama komhlaba, yini ozoyisebenzisa ukugcina amanzi ukuhlangabezana nezidingo zakho zamanzi?
Isiqukathi sethu sokugcina amanzi esigoqekayo sizokunikeza okulungiselelwe okuphuthumayo okubaluleke kakhulu kwemishini yakho esindisa impilo!
Isiqukathi sethu esinesibambo siyimpahla esezingeni eliphakeme ye-LDPE, i-BPA-free, i-polyethylene esezingeni lokudla kanye neziqukathi zepulasitiki ezingasetshenzisi.
Isikhwama samanzi esigoqekayo sigoqeka, sikhanya, siyaphatheka, sihlala isikhathi eside, siphinde sisebenzise isikhwama sokugcina amanzi, esifanelekile kunoma iyiphi indawo, okulula ukusisebenzisa nokusisebenzisa.
Langaphambilini Isikhwama esingu-20 litre chekerer ebhokisini
Olandelayo: Ibanga lokudla i-LDPE cubitainer
Isikhwama SaseCubitainer Ebhokisini Le-Adblue